Mourinho oo shaaca ka qaaday xaqiiqda ku aadan in Real Madrid uu heshiis la gaaray si uu dib ugu laabto – Gool FM
“Geesiga England, Spain iyo Italy ma jiraan wax xadidan si aad u gaarto riyaadada” – CR7 oo hadlay
Mbappe oo magacaabay ciyaaryahanka ku guuleysan kara abaal marinta Ballon d’Or 2019
UEFA oo sharci isku mid ah ka bedeshay Final-ka Champions League iyo midka Europa League
Xiddig ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain oo bartilmaameed u ah Manchester United oo hadlay… (Muxuu yiri?)
Kroos oo ka hadlay suurtagalnimada ay xiddigaha Pogba iyo Mbappe ku imaan karaan Real Madrid
Guardiola oo sii go’aamiyay badalka kabtankii kooxda Manchester City ee Vincent Kompany
Mourinho oo shaaca ka qaaday xaqiiqda ku aadan in Real Madrid uu heshiis la gaaray si uu dib ugu laabto
Dajiye March 7, 2019
(Yurub) 07 Maarso 2019.Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqda ah in kooxda Real Madrid ay heshiis kala gaartay inuu noqdo badalka Santiago Solari ee xilli ciyaareedka soo aadan.
Wrgeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay mcalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, kaasoo uu kaga hadlay wararka lala xiriirinayo dib ugu laabashada kooxdiisii hore ee Real Madrid.
“Ma jiro wax wada hadal ah, mana jirto xiriir ka yimid Real Madrid”.
“Ma jirin wadaxaajoodyo aan la galay Real Madrid si aan dib ugu laabto, lakiin wararka xanta ah ee kubada cagta waa wax iska caadi ah, marka ay kooxda guuleysato runtii waxaan dareemayay farxad”.
“Uma maleynayo inay jiri doonto koox dib u sameyn karta, wixii ay kooxdu sameysay dhowrkii sanno ee la soo dhaafay”.
“Guuldaradii Ajax waxay ahayd wax la yaab leh, laakiin waxaan arkayaa ixtiraam badan oo ku saabsan waxay kooxdu horey u qabatay, ee ku aadan tartanka Champions League, kuma guuleysan kartid afarta, shan ama lix jeer ee tartankan ah”
“Waa inaad weydiisaa kooxo kale hadii ay doonayaan inay ku guuleystaan Champions League seddex jeer oo isku xiga, kadibna ay ku haraan wareega 16-ka, dabcan jawaab celina ay bixinayaan ayaa hubanti ah inay noqon doonto inay raali ka yihiin”.
Madaxweynaha kooxda Barcelona oo shaaca ka qaaday xidiga ay doonayaan inay lasoo saxiixdaan